Bishnu Sharma: फिल्म समीक्षा : छड्के (हेरम कि नहेरम)
२२ फेव्रुअरी, २०१३
रेटिङ : २
निर्देशक : निगम श्रेष्ठ
कास्ट : सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, अर्पण थापा, नम्रता श्रेष्ठ, रविन तामाङ
लू व्रेक : पहिलो हाफमा जतिबेला पनि
श्रेणी : ग्याङस्टर र सोसल ड्रामा
लगानी : १ करोड
नेपाल रिलिज : २२ फेव्रुअरी (काठमाडौं उपत्यका र मोफसल)
राम्रो के छ ? : फिल्मको विषयवस्तु छनौट गतिलो छ । प्राकृतिक सम्पदा र जीवजन्तुको विनास, अपराधको आडमा हुने राजनीतिकरण, गरिबीले मासिएको युवा सपना, अस्थिर राजनीतिजस्ता मुद्दा फिल्मको एजेन्डा हुन् । चितवनको ताजा लोकेसनले आँखालाई शीतल बनाउन सक्छ । संगीत रक स्वादमा स्वादिला र कर्णप्रिय छन् ।
नराम्रो के छ ? : फिल्मको सर्वाधिक कमजोरी पक्ष भनेकै कथा भन्ने शैली (स्टोरी टेलिङ)मा हो । के न्यारेसन भन्ने कुरामा स्वयम निर्देशकमा अन्यौल छ । फिल्मको प्रोटागोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट के हो, फिल्मको अवधीभर थाहा हुँदैन । मुख्य पात्र नै थाहा नभएपछि त्यसको गोल कम्पासविनाको जहाजजस्तै हुनेछ । निर्देशकले पात्रलाई तिनको चरित्रमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । प्रत्येक पात्र विनाउद्देश्य क्राउड बनेका छन् । नेपाली फिल्मको आधारभूत समस्याका रुपमा रहेको ‘द्वन्द्व’ यसमा पनि अर्को मुख्य समस्याको रुपमा छ । इमोसनल ट्रान्सफर नहुँदा रुनुपर्ने ठाउँमा हाँस्नुपर्ने अवस्था छ । द्वन्द्व नहुँदा यस्तो भएको हो । ड्रामा अनावश्यक हावी छ । समग्रमा चलचित्र साहित्यिक उत्पादन हो भन्ने कुरालाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । औपन्यासिकता र नाट्य संरचना फिल्मको मुख्य समस्या हो । यी दुई अभावमा फिल्मको छायांकन, अभिनय, सम्पादन र संगीतको विश्लेषण गर्नु जरुरी छैन । निर्देशकलाई मेरो प्रश्न –फिल्म आँखाले हेर्ने हो कि कानले सुन्ने विधा हो ? तपाईंको फिल्ममा सिनेम्याट्रिक ल्यांग्वेज के हो ?
ब्यापार कस्तो हुन्छ ? : फिल्मको लगानी १ करोड बताइएको छ । यो लगानीको प्रतिफल उठाउन फिल्मले ३ करोडभन्दा बढी ग्रस आम्दानी गर्नुपर्छ । एकपटक हेरिसकेपछि अर्कोपटक दर्शकले हेर्नुपर्ने फिल्म मार्केटिङ (वर्ड अफ माउथ पब्लिसिटी) फिल्ममा छैन । त्यसकारण तीनचारको इनिसियल कलेक्सनपछि फिल्मको कलेक्सन ग्राफ घट्दै जाने छ । पहिलो ३ दिनमा ५०–६० लाखको ग्रस मैले आशा गरेको छु । क्यूएफएक्स र एफक्युबको टिकट दरलाई आधारमान्दा यो रकम हुन आउँछ । यसका खास दर्शक सहरिया निम्न मध्यम वर्ग भएकाले मल्टिप्लेक्समा मात्र यसको ब्यापार हुनेछ । मोफसलका सिंगल स्क्रिनमा खास चल्नेछैन ।
यसका बाँकी प्रभावहरू ?
यदि यो फिल्म असफल भयो भने यसको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर सिंगो फिल्म क्षेत्रमा फैलनेछ । ‘छड्के’बाट आशा गरेका निर्माता र निर्देशकहरू यसको असफलतापछि कोठाभित्र खुट्टा खुम्चाएर बस्न बाध्य हुनेछन् । सफल भएमा आम निराशाबाट गुज्रिएको क्षेत्रमा अर्को उत्साह र आशाको संचार हुनेछ । तत्कालै फिल्म बनाउन पाइला चाल्न थालेका नयाँ निर्देशकलाई सोच्न बाध्य पारिदिनेछ । भने, निर्माताहरू झस्कनेछन् । फिल्म किन चल्न छाडे भनेर बहस उठ्नेछ र विमर्शको अभ्यास सुरु हुनेछ ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:19 AM